"Ifiva kakhulu wayesoloko egula. ukuba yintoni ezakwenziwe?"Impendulo,!
ulapha: ekhaya Tips "Ifiva kakhulu wayesoloko egula. ukuba yintoni ezakwenziwe?"Impendulo,!
Ukususela ebuntwaneni sonke siyazi iimpawu abandayo ngokugqibeleleyo ezingemnandi: prostration, iqondo lobushushu, ingqele, ukukhohlela, amathambo ngamathambo kunye nezinye ezifana "ngamakhubalo". Abadala badla sigule ngaphants, ngaphezu kwabantwana, kodwa aninako ukuthi, ukuba kube lula ukuba ukukhusela kwiintsholongwane kwengqele eqhelekileyo kunye nosulelo.
Namhlanje siza kuthetha, ungayinqanda njani ukubuya ekuqaleni sifo emva nje ukuphiliswa. Iingxaki - nakwezona nxalenye ezingentle ingqele eqhelekileyo, ngenxa yokuba bandiqumbise ukuba mandundu zezifo ezingapheliyo, kwaye kukhokelela kuphuhliso lwezifo kwanangezibilini entsha. Kuthintelo nonyango lwe yingqele kunye nenqaku chiayte umkhuhlane kwisayithi yethu – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
ukuze, umngcipheko iingxaki kunye ukwenzeka sifo eliphezulu, ukuba:
ubushushu xa sifo ziye zancitshiswa - uphawu yokuwohloka zokuzikhusela zomzimba kunye nokukhululeka;
ugula ixesha elide 7-10 iintsuku, kunye nophuculo okwethutyana;
Kwabonakala bamba umphefumlo;
khohlo luphuhlisa zingisa.
Ukuba iindlela ozisebenzisileyo unyango azikwazanga ukubaluleka kwabo xa kusenziwa,, kuqala kufuneka utyelele ugqirha. mhlawumbi, okanye kwimeko amalungiselelo alufanelekanga okanye engafanelekanga, kwi iirejimeni zonyango engalunganga, okanye iingxaki ezinzulu umzimba wakho.
inowuthi, isimo sengqondo, ukuze ibe nefuthe elikhulu kakhulu kwisantya kwakhona. The angabathembi ngakumbi umoya yakho yangaphakathi, siethe amajoni akho omzimba. Kwakhona, umzimba ufuna ukuphumla olufanelekileyo, ngenye indlela apho kuya kuthatha amandla yokukhusela kusulelo lwezifo kunye namakhondo yimpumelelo?
Iingxaki yingqele kunokuba otitis, sinusitis, iphika, inyumoniya, kunye nonyango naziphi na kwezi meko kusenokufuna amandla ngaphezulu, ku nya ngempilo yabo ukwenzela ukuthintela uphuhliso yeengxaki.
Ukuba ibinzana elithi "iingqele kakhulu wayesoloko egula, into ukwenza - andazi "ngawe, amanyathelo akhawulezileyo kufuneka kuthathwe ngoko nangoko ukuba kuliwe iingqele. Oku kuya kunceda Fortsis ichiza elitsha - ilozenji na polyphenol ezintsonkothileyo olusebenzayo.
Ezi zinto zigutyungelwe iintsholongwane neebhaktiriya, musa ukuvumela ukuba ugqithele, ngokuthintela ukuqhubela phambili kwesifo. Kungenxa yoko le nto ukusebenza Fortsis, kuthelekiswa iziyobisi ezininzi kwikhemesti, aphezulu kakhulu.
Fortsis uncedo khusela wena kunye nabo zibathandayo kukugodola ngexesha kwaye amandla njengenxalenye kunye nesifo ngokukhawuleza, ukuba usulelo sele yenzekile. Fortsis - iyeza yanamhlanje kwabo, ofuna ukuhlala ngaphandle iingqele!